နည်းပညာနှင့်သီတင်းရပ်ဝန်း: G talk မှာ မိမိလိပ်စာ မကျန်စေချင်ရင် နှင့် မော်ဇီလာဖိုင်းယားဖောက်စ် အကြောင်း သိကောင်းစရာလေးများ
G talk မှာ မိမိလိပ်စာ မကျန်စေချင်ရင် နှင့် မော်ဇီလာဖိုင်းယားဖောက်စ် အကြောင်း သိကောင်းစရာလေးများ
...ကျွန်တော်တို. Gtalk သုံးတဲ့အခါမှာတော်များများကတော့အင်တာနက်ဆိုင်မှာသုံးတာများပါတယ် ။ အခုတင်ပြတဲ့နည်းကတော့အင်တာနက်ဆိုင်မှာမိမိရဲ.Gmail Addressတွေမကျန် ခဲ့စေအောင်သုံးတဲ့နည်းလေးပါ။ဒီလိုပါ။မိမိGtalk မ၀င်ခင် မိမိရဲ.ရှေကဘယ်သူတွေ Gtalk၀င်သွားလဲ၊ သူတို.ရဲ. Gmail Addressတွေက ဘာနာမည်လဲဆိုတာသိချင်ကြပါလိမ့်မယ်။ နောက်တခုက မိမိ Gtalk ၀င်ခဲ့ရင်လဲမိမိ GmailAddressကိုသူများ မသိအောင် ဘယ်လိုဖျက်မလဲဆိုတာတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။သူများသိတော့ကို ကို invite လုပ်မှာပေါ့။အဒီတော့ စက်ထဲမှာ မိမိ Gmail Addressမကျန်ခဲ့စေရန်ရည်ရွယ်ရေးသွားပါတယ်။
Posted by Hajee Than Hla Oo at 11:38 AM